‘हत्या कि आत्महत्या ?’ | रेडियो झापा 100.7 MHz.
‘हत्या कि आत्महत्या ?’
अविन मेयाङ्बो बुधबार, भाद्र २४, २०७७ १४:१९:३७
गत सोमबार बिहान धरान उपमहानगरपालिका–११ स्थित घरको कोठामा २२ वर्षीया सोनी हाङ्मा लिम्बु मृत फेला परिन् । सोनीको घर पटिका आफन्तले उनले आत्महत्या गरेको बताएका छन् तर सोनीका साथीहरु र माईती पक्षले भने आत्महत्या नभई सोनीको हत्या भएको दाबी गरेपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ ।
माइती पक्षले मङ्गलबार सोनी मृत्युबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा उजुरी दिएका थिए । तर प्रहरीले छानबिन नथालेको सोनीका काका टेकराज तिगेलाको भनाई छ ।
काका टेकराजका अनुसार सोनीको मृत्यु भएपछि पनि घरपटिबाट माईती पक्षलाई जानकारी गराइएको थिएन । सिङ्गापुरबाट आफन्तले खबर गरेपछि मात्र जानकारी पाएको उनले बताए । उनले ब्लाष्टसँग भने, ‘सुचना ढिलो पाईयो । त्यसैले यहाँ आउँदा पनि ढिलो भयो । ढोका खोलेर छोरीको शव हेर्दा ओछ्यानमा सुताइएको थियो । सबै कुरा हेर्दा आत्महत्या जस्तो लागेन ।’
उनका अनुसार घरपटिका आफन्तले ढोका खोलेर हेर्दा सोनी झुन्डिएको देखेपछि हतार हतार तल झार्दा तातै थियो तर झारिसकेपछि चिसो भएको बताएका थिए । टेकराज भन्छन्,‘झुन्डिएको ठाउँबाट झारिएको हो भने किन तुरुन्तै हस्पिटल लगिएन ? आफैं मरेको घोषणा गर्ने कि अस्पताल पुर्याउँने ? त्यहिंबाट हामीलाई शंका लाग्यो । ’
उनका अनुसार परिवारले सुरुमा डोरी काटेर झारेको बताएका थिए तर उनी झुन्डिएको भनिएको सल काटिएको थिएन । सलको बाँधिएको भाग फुकाइएको पनि थिएन । ‘हामीले नाच्दा बाँधिएको भाग १८ इन्चको गोलाई छ । तर त्यतिमा टाउको अट्दैन । झुन्डि मर्नेको आँखाबाट आँशु, र्याल सिंगान वा दिशा पिसाव निस्किन्छ भन्छन्, त्यो पनि देखिएन ।’ टेकराज भन्छन्,‘झुन्डिने मान्छेको घाँटीमा यु आकारको डाम बन्छ रे तर सोनीको घाँटीमा गोलो घेराको दाग छ ।’
सोनीको हत्या भएको आशंका लागेपछि माइती पक्षले मुचुल्कामा समेत सही गर्न मानेन । घटनाको यथार्थ छानबिन नभएसम्म शव नउठाउने माइती पक्षको अडान थियो । त्यसपछि प्रहरीले शव उठाएर लगेको थियो । काका टेकराज भन्छन्,‘हामीले जनप्रतिनिधि, स्थानीयवासी, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार सबैको रोहबरमा मुचुल्का गरौं अनि सही गर्छौं भनेका थियौं तर प्रहरीले त्यसो नगरेपछि हामीले सही गरेनौं । हाम्रो रोहबर बिना शव उठाईयो, यसमा हाम्रो आपत्ती छ ।’
प्रहरीको व्यवहारबाट समेत असन्तुष्ट बनेका माइती पक्षले बुधबार विहान छथरे समाजमा छलफल गरी तुरुन्तै छानबिन नथाले आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरेको काका टेकराजले बताए । प्रहरीले भने घटनाको सत्य तथ्य छानबिन हुने बताएको छ ।
पोखरामा महिलाको हत्या गरेको आरोपमा दुइजना पक्राउ
चर्चित र्यापर लाहुरे लागु औषध सहित पक्राउ
अत्याधुनिक हतियारसहित सुनचाँदी पसलमा लुटपाटमा संलग्न पक्राउ
धर्मपुत्र छोराले गरे बाबुको हत्या
सन्तोषी हत्या आरोपमा एक जना पक्राउ
चराको आवाज निकालेर भाइरल बनेकी सन्तोषी सुब्बाको हत्या
वनको कर्मचारी र पत्रकार भन्दै ठग्ने पक्राउ
दमकमा रेडियोलोजी पढ्दै गरेकी स्रेजलको बलात्कारपछि हत्या : प्रहरी अनुसन्धान